adverb မော်ကွန်း - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
စက်တင်ဘာလ 8, 2017 ဇန်နဝါရီလ 12, 2016 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
တစ်ဦး Adverb ကဘာလဲ
An ကြိယာဝိသေသန ကိုအကြောင်းပိုမိုပြောထားသည် ကြိယာ
An ကြိယာဝိသေသန ဖော်ပြထားတယ်သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော တချို့လမ်းများတွင်ကြိယာ
များသော ဖိုင်လင့်များပါသည့် အဆိုပါနောက်ဆက်နှင့်အတူအဆုံး "Ly" ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်။
ကိရိယာဝိသေသန မကြာခဏပြောပြ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လို တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်
တစ်ခုက adverb တစ်ကြိယာတစ်ခုနာမဝိသေသနသို့မဟုတ်အခြား adverb ဖော်ပြထားတယ်, ကဘယ်လို, ဘယ်မှာအခါ, အဘယ်ကြောင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ ဤတွင်အချို့သောဖိုင်လင့်များပါသည့်ဖြစ်ကြသည်။
ပတေရုသညျအလှနျအမျက် ထွက်. အဖြစ် ခဏခဏ
အတိုက်အခံ Adjective များစာရင်း
ထိပ်တန်း 100 +
အမြဲတမ်း - အများအားဖြင့် - မကြာခဏ - မကြာခဏဆိုသလို - တခါတရံ - ရံဖန်ရံခါ - ရံဖန်ရံခါ - ရှားပါးသော - ဘယ်တော့မှမ
အညီ - ဒါ့အပြင် - လည်း - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - မှတပါး - ဆက်ဆက် - နှိုင်းယှဉ် - အကျိုးဆက် - အပြန်အလှန် - တခြားနေရာ - အညီအမျှ - နောက်ဆုံးတော့ - နောက်ထပ် - ထို့ပြင် - ဤအရပ်မှ - ယခု မှစ. - သို့သော် - စကားမစပ် - အမှန်ပင် - အစား - ထိုနည်းတူ - အတောအတွင်း - ထိုမှတပါး - အမည်ရ - သို့ရာတွင် - လာမယ့် - မည်သို့ပင်ဆိုစေ - ယခုအခါ - မဟုတ်ရင် - မဟုတ်ဘဲ - အလားတူ - နေတုန်းပဲ -subsequently - ပြီးတော့ - အဲဒီနောက် - ထို့ကြောင့် - အရှင် - ခြော - သေး
တူညီသည့်အ Adverb များစာရင်း
ဆက်ဖတ်ရန်တစ်ဦး Adverb ဘာလဲ | adverb များစာရင်း | adverb စာရင်း
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ကိရိယာဝိသေသန23 မှတ်ချက်
ဇန်နဝါရီလ 7, 2014 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်